सस्क्राईबर डट कम : अब हजार रुपैँयामा हजार सब्सक्राईबर - Nepal Post Daily
बीरगन्ज, ७ माघ । युट्युबमा सब्रस्क्राईबर जोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? कन्टेन्ट सृजना गर्न समस्या भएको छ ?
अब यस्ता विभिन्न समस्याहरुको सहज समाधान हुने भएको छ । युट्युब सब्सक्राईबर, कन्टेन्ट, भ्लोगिंगलगायतका विभिन्न समस्याहरुको समाधान अब सस्क्राईबर डट कमले गर्ने भएको हो । झापाका युवाहरुको एक टोलिले सुरु गरेको सस्क्राईबर भन्ने स्टार्ट अपले डिजिटल माध्यममा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्नेछ ।
युट्युबमा भिडियो बुस्ट, फेसबुक पोष्ट बुस्ट, ईन्स्टाग्राम एकाउन्ट प्रोमोशन, कन्टेन्ट सृजना, च्यानल सर्वेक्षणलगायतका शिर्षकहरुमा सहायतका लागि सस्क्राईबरको स्थापना गरिएको जनाइएको छ । केही महिना अघिबाट काम सुरुवात गरेको सस्क्राईबर डट कमको रु. १ हजारमा, १ हजार युट्युब सब्स्क्राईबरको योजनालाई धेरैलाई मनपराएका छन् । आफुहरुको यो योजना अन्तर्गत युट्युबमा रु १ हजारमा, १ हजार अर्गानिक सब्सक्राईबर दिने सस्क्राईबर डट कमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असिम श्रेष्ठले जानकारी गराए ।
उनले सुरुमा आफुहरुले च्यानलको अध्ययन गरि मात्रै सब्सक्राईबार प्रदान गर्ने बताए । उनका अनुसार सब्सक्राईबर प्रदान गर्दा कुनै सफ्टवेयरको प्रयोग गरिने छैन । आफुहरुद्धारा प्रदान हुने हरेक सब्सक्राईबार वास्तविक हुने विषयमा ढुक्क हुन सस्क्राईबर डट कमका संस्थापक समेत रहेका श्रेष्ठले दाबी गरे ।
एक दिनमा एउटा च्यानल पब्लिक गर्ने र त्यसपछि सब्सक्राईबको प्रक्रिया अगाडी बढाईने उनको भनाई छ ।
“धेरैले यसलाई स्क्याम भन्न सक्छन्, विश्वास नगर्न सक्छन्, तर, यो कुनै स्क्याम होईन्”, श्रेष्ठ भन्छन्, “विभिन्न प्रक्रिया तथा चरणहरु छन् जसले प्रमाणको रुपमा काम गर्छन् ।”
सुरुवातको खण्डमा रहेको सस्क्राईबरको डट कमले युट्युब तथा अन्य सामाजिक सञ्जालको माध्यमहरुका लागि सामाग्री सृजनामा समेत टेवा पुर्याउने छ । विभिन्न संकाय अन्तर्गत प्लस २ मा अध्ययनरत युवाहरुले सुरु गरेका हुन्, सस्क्राईबर डट कम ।
Previous article‘सीधा कुरा जनतासँग’का सञ्चालक रवि लामिछानेले छाडे न्युज २४ टेलिभिजन
Next articleभारतले दिएको कोरोना खोप नेपाल आइपुग्यो
Susan rai January 24, 2021	At	9:31 pm